Akwụkwọ Ozi Si n’Aka Òtù Na-achị Isi nke Ndịàmà Jehova | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2016
Aịzaya onye amụma kwetara na ọganihu ọ bụla Alaeze Juda nwere si n’aka Jehova. O kwuru n’Aịzaya 26:12, sị: “Jehova, . . . ị rụworo anyị ọbụna ọrụ anyị niile.” Mgbe anyị chebachaara ihe niile anyị rụrụ n’afọ gara aga echiche, anyị kwetakwara na ọ bụ Jehova ka ha si n’aka. O doro anya na Jehova na-arụ “ihe ndị dị ebube a na-arụtụbeghị.” (Ọpụ. 34:10) Chebagodịrị ụzọ ụfọdụ o sirila gọzie anyị echiche.
Anyị ejirila ebe anyị na-edebe ihe n’Ịntanet bụ́ jw.org nyere ọtụtụ ndị aka. E nwere ya ugbu a n’ihe karịrị narị asụsụ isii. Mmadụ nwekwara ike ịnọ na ya gụọ ma ọ bụ danloduo akwụkwọ anyị n’ihe karịrị narị asụsụ asaa na iri ise. Olee otú anyị sirila jiri ya nyere ọtụtụ ndị chọrọ ịmụta eziokwu dị́ na Baịbụl aka? Tụlee ihe atụ a: E nwere otu di na nwunye ike ịga chọọchị gwụrụ n’ihi soro okwu ọnụ m esola omume m ọ hụrụ ndị chọọchị na-eme. Mgbe ha na-achọgharị otú ha ga-esi mata onye Chineke bụ, ha hụrụ jw.org ma gaa na ya. Ha na-agazi na ya agụ akwụkwọ anyị ma na-ele vidio anyị. Ha danlodukwara Inyocha Akwụkwọ Nsọ Kwa Ụbọchị, ha na ụmụ ha abụọ na-ejikwa ya agụ ihe mmụta dịịrị ụbọchị. Ọ bụ ihe ha na-agụ n’otu ụtụtụ Ndịàmà Jehova bịara kụọ aka n’ọnụ ụzọ ụlọ ha. Ndịàmà Jehova ahụ chọpụtara na tupu ha abịa n’ezinụlọ a, ha agbanweela ọtụtụ ihe ná ndụ ha n’ihi ihe ha gụtara na jw.org. Ha ewepụla egbugbu ndị ha gburu n’ahụ́, tụfuokwa ọla ndị ha gbanyegasịrị n’ahụ́, na ihe oyiyi okpukpe ndị ha nwere. Ha akwụsịkwala ime ememme ndị ụwa na ile fim ndị na-adịghị mma. N’oge a na-ede akwụkwọ a, di na nwunye a na otu n’ime ụmụ ha aghọọla ndị nkwusa. Di na nwunye a chọkwara ime baptizim n’oge na-adịghị anya.
Ọtụtụ ndị edetakwarala anyị akwụkwọ ozi kelee anyị maka ihe omume tiivi anyị na-eme kwa ọnwa. Ka ọ dị ugbu a, a na-eme ihe omume tiivi a n’ihe karịrị asụsụ iri asaa. A ga na-emekwa ya n’asụsụ ndị ọzọ ka oge na-aga. Ọtụtụ ezinụlọ na-eji ya enwe ofufe ezinụlọ. Otu nwanna kwuru, sị: “Nzukọ Jehova ebukwuola ibu ugbu a. N’agbanyeghị nke ahụ, anyị amatakwuola otú ihe si aga n’isi ụlọ ọrụ anyị.”
Mgbakọ ukwu na-atọgbu ụmụnna anyị atọgbu. Ọ bụkwa otú mgbakọ ukwu nke afọ ije ozi 2015 dị ha. Ná mgbakọ a, e gosiri vidio na ihe osise iri anọ na abụọ, kpọọkwa egwú tọrọ ezigbo ụtọ tupu ihe omume ụtụtụ na nke ehihie amalite n’ụbọchị ọ bụla. Otu nwanna nọterela aka n’ọgbakọ kwuru banyere ihe omume mgbakọ a, sị, “O yiri ka o nweghị onye bịara mgbakọ a chọrọ isi n’oche ya pụọ n’ihi na o nweghị onye chọrọ ka a kọọrọ ya ihe ọ bụla akọọrọ.” Otu onye ozi ala ọzọ kwuru banyere mgbakọ afọ gara aga, sị, “Vidio ndị e gosiri ná mgbakọ ahụ mere ka m kwetasie ike na Alaeze Chineke bụ ọchịchị dị adị, meekwa ka eziokwu dokwuo m anya.”
Jehova ji abụ Alaeze ndị ọhụrụ gọzie anyị n’afọ gara aga. Otu di na nwunye detara akwụkwọ ozi, sị: “Abụ ọhụrụ ndị a dị ka ebe Jehova bịara makụọ anyị. N’oge dị iche iche obi na-adịghị anyị mma, ha mere ka obi dị anyị mma.” Mgbakọ ukwu anyị na-echetara anyị mbọ ụmụnna na-ahaziri anyị abụ ndị a na-agba n’ihi anyị. Ha na-eme ihe a niile ka a na-etokwu Jehova.
Anyị na-agba unu niile ume ka unu jiri obi unu niile nabata ndị lọghachiterenụ, otú ahụ Jehova na-eme
Ọgbakọ unu ọ̀ na-eji tebụl ma ọ bụ ihe a na-akwagharị akwagharị edosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo? Isi otú a ekwusa ozi ọma abaala ezigbo uru. Ọtụtụ ndị bí n’ebe a na-anaghị ekwecha ndị mmadụ bata esila n’ụzọ dị́ otú a nụ ozi ọma na nke mbụ ya. E sikwala n’ụzọ dị otú a nyere ọtụtụ ndị aka, nyekwara ụmụnna anyị kwụsịrịla ịga ozi ọma na ọmụmụ ihe aka. N’ọnwa Jenụwarị afọ 2015, otu nwoke nọ́ na Saụt Koria bịara n’otu n’ime ebe ndị e dosara akwụkwọ anyị. O kwuru na ya ebidola iche echiche gbasara Chineke na nso nso a. A malitere ịmụrụ ya Baịbụl. Ọ bịara ọmụmụ ihe mbụ ya n’ọnwa Febụwarị, kwụsị ịṅụ sịga n’ọnwa Mach. N’ọnwa Eprel, ọ gara leta alaka ụlọ ọrụ anyị dị́ na Saụt Koria, ọ na-emekwa nke ọma n’ọgbakọ. Ihe ole na ole a anyị kọrọ so n’akụkọ ndị anyị natara n’isi ụlọ ọrụ anyị gbasara uru idosa akwụkwọ anyị n’ebe na-ekwo ekwo bara.
Ekpere anyị bụ ka ihe ndị e kwuru ná mgbakọ ukwu afọ gara aga mee ka ọtụtụ ụmụnna anyị kwụsịrịla ịbịa ọmụmụ ihe lọghachikwute Jehova ugbu a oge ka dị. Anyị na-agbakwa unu niile ume ka unu jiri obi unu niile nabata ndị lọghachiterenụ, otú ahụ Jehova na-eme.—Ezik. 34:16.
N’eziokwu, Jehova gọziri ndị ya n’afọ ije ozi gara aga. Olee ihe ndị ọzọ anyị na-atụ anya ha? Anyị ga-enwe ndidi chere ka anyị hụ. Ka ọ dịgodị, maranụ na anyị hụrụ unu niile n’anya, anyị na-etinyekwa unu n’ekpere.
Anyị chọrọ ka ihe gaziere unu,